We Fight We Win. -- " More than Media ": တိုက်ရဲသူ သူရဲကောင်း ဦးစိုးကြွယ်
တိုက်ရဲသူ သူရဲကောင်း ဦးစိုးကြွယ်
(ဆန္ဒပြသူ ဦးစိုးကြွယ်မှဖမ်းဆီးသူ ရဲများအားမေတ္တာရပ်ခံချက်)
Anyone know where is he and what is his condition?. Suchabrave & steady man.
ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးအတွက် စတေးရဲတဲ့ သူတယောက်၊
Very brave man! Respected!!
12 January 2012 at 22:30